Barnaamijka Muuqaalka Bulshada, Howlgalada Bosaaso iyo dareenka dadweynaha (dhegayso) – Radio Daljir
Barnaamijka Muuqaalka Bulshada, Howlgalada Bosaaso iyo dareenka dadweynaha (dhegayso)
Febraayo 9, 2019 8:44 b 0
Maanta barnaamijka waxaan ku falanqayn doonnaa howlgalada ka socda Bosaaso iyo dareenka dadweynaha sideen ciidamada iyo shacabka ay u wada shaqayn karaan ? maxay qabtaan ciidamada PSF (Puntland Security Force), ayna maalgaliso dowladda Mareykanka, qaybta Africa Command Center Jabuuti ee Combined Joint Task Force, Horn of Africa (CJTF-HOA), iyo ciidanka Booliska Badda ee ayana loo yaqaan PMPF oo ay maalgaliso dowladda Imaaraadka Carabta.? amniga Bosaaso ma waxaa lagu soo celinkaraa ciidamo tikniko wata oo taagan wadooyinka magaalada ? su,aalahaas iyo kuwo kale waxaan ubandhignay shacabka Puntland oo ka qayb qaadanayay barnaamijka Muuqaalka Bulshada .
Faah Faahin: Duqeyn diyaaradeed oo lagu dilay xubno katirsan Argagixisada Al-shabaab (dhegayso)